-Lọ ọrụ na-emeghe oghere n'olu - Qualitylọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ndị na-eweta ihe dị elu
Automatic Suger mbukota Machine Open-ọnụ akpa bagging Machine
Ihe nlere GW Gravity Flow Gross Weigh Open Mouth Bag bụ nke a na-echekwa akpa nke nwere ike mejupụta ihe ndị na-asọpụta na-abanye n'ime oghere akpa. Ngwaahịa na-esite n'ike ndọda site na mpempe akwụkwọ hopper na-abanye n'ime ntinye ndepụta ngwaahịa na elu igwe.
Automatic Sand mbukota Machine Open-ọnụ akpa Bagging Machine
GAOGE na-arụpụta ọtụtụ igwe eji eme ihe na Granule maka ngwa maka akpa na akpa na-ejuputa ọtụtụ ntụ ntụ gụnyere nkwakọ nnụnnụ nnụnnụ, nnu, shuga, nri ehi, nri azụ, kọfị na ndị ọzọ.
Automatic Salt mbukota Machine Open-ọnụ akpa Bagging Machine
Automatic Rice Open-ọnụ Bag mbukota Machine Bagging Machine
GW GAOGEPAK sistemụ na-etinye akpaka akpaka, emebere iji mejupụta ma mechie obere oghere na akpa gusseted.
Ya compactize karịsịa pụtara na igwe nwere ike arụnyere ọ bụla ẹdude mmepụta ebe.
Akpaka rabbit Pellrt Nri Automatic Open-ọnụ akpa Bagging Machine
Automatic Granule Plastic Pellet Open-ọnụ Bagging Machine
Akpaaka Akpa Akpa Granule Na-akwakọba Igwe n'eziokwu, ihe ngwọta mechatronic na-egosipụta mgbanwe ngbanwe akpaka kpamkpam, wepụtara site na ntụkwasị obi ha, nguzogide na ntụgharị. A na-eji ha na nkwakọ ngwaahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nnukwu ọ bụla, ngwaahịa siri ike.
Automatic 5-50KG Animal ndepụta Pet Feed Granule mbukota Machine
Akpaghị aka Animal ndepụta Pet nri Granule mbukota Machine na-eji akpaka erikpu na mbukota maka granule ihe onwunwe n'ime nnukwu akpa si 10kg na 50kg
Akpaaka 20-50kg Mịnye Nnukwu Bag Granule Bagging Packing Machine
Akpaka, usoro na-agbanwe agbanwe nke juputara maka ijuju na ịche ụdị dị iche iche na ụdị nke akpa eji emeghe ọnụ. Igwe akụrụngwa na-emeghe emeghe dị ngwa, nchekwa na kọmpat, enwere ike ịhazi ya ka ọ daba n'ụdị ụdị mmepụta ọ bụla, ma ọ dị ọhụụ ma ọ dị adị.
Automatic 20-50kg Horse Feed mbukota Machine Open-ọnụ Bagging Machine
Akpaaka Mkpụrụ Mkpụrụ Mbukota Na-emeghe Mpo akpa Igwe
Akpaka Fatịlaịza Bagging mbukota Machine Open-ọnụ Bagging Machine
Igwe akụrụngwa na-akpaghị aka maka akpa gusseted na nke na-abụghị gusseted. Ezigbo maka nnukwu mmepụta na nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa granular n'ọtụtụ dịgasị iche iche.